ငွေလမင်း: 4/1/11 - 5/1/11
Mustafa ကိုသွားပြီး ဖိနပ်ဝယ်တယ်
တစ်ရံကို ၁၈ ကျပ်ခွဲ ။
ကုန်တိုက်သွားတာလမ်းမှားပြီး ကုန်စိမ်းတန်းရောက်လို့ ချဉ်ပေါင်ရွက်တွေ့တာနဲ့ ၀ယ်ခဲ့လိုက်တယ် တစ်ကျပ်ဘိုးတဲ့။
တန်တာနဲ့ နောက်တစ်ကျပ်ဘိုး ထပ်ဝယ်လိုက်တော့ ၂ကျပ်ဘိုးဖြစ်သွားတယ်။
ချွေလိုက်တာ အဲလောက်အပုံကြီးဖြစ်သွားတယ်။ အဲဒီအတိုင်းအခြောက်ခံထားလိုက်တယ်။
ဒါကတော့ အရွက်ချွေလို့ ကျန်တဲ့ အရိုးတံတွေပေါ့။
ဒါကတော့ပင်နီဆူလာကနေ ၀ယ်ထားတဲ့ မျှစ် ၁ကျပ်တန်။
စိတ်မထိန်းနိုင်တာနဲ့၊ ငပိသေးသေးလေး တစ်တုံးရယ်၊ မျှစ်နဲနဲရယ်၊ ငရုတ်သီးကျော်ပြီးသား ၄တောင့်ရယ်၊ နနွင်းမှုန့်နဲနဲ၊ အချိုမှုန့်၊ ငရုပ်သီးအရောင်တင်နဲနဲ၊ ထည့်ပြီး လက်တဆုတ်စာလောက်ကို ထည့် ကြော်လိုက်တာ။
အဲဒါနဲ့ ပုဂံထဲထည့်ပြီး နှစ်ယောက်သား စားလိုက်ကြတယ်၊ ကောင်းလိုက်တာ တအားဘဲ၊ မဒမ်ကတောင်ပြောသေးတယ်၊ ကိုကိုငွေက သိပ်တော်တယ်ဆိုဘဲ။
အဲဒီအပုံကြီးက အခြောက်ခံထားတာ၊ နောက်ကျမှာ ကြော်ချင်ရင်ကြော်၊ ဒါမှမဟုတ် အရေသောက်ချက်မယ်လို့မှန်းထားတယ်။ (မှတ်ချက်) ဒီရက်အတွင်း ဧည့်သည်လက်မခံ။ လာဖတ်တဲ့လူတွေကတော့ ငွေလမင်းတို့ကို ဆားချက်တယ်ထင်ကြမှာပေါ့ ၊ တစ်ကယ်တန်းက ဆားချက်တာမဟုတ်ရပါဘူး၊ သေသေချာချာကြည့်ကြပါ ချဉ်ပေါင်ရွက်ချက်တာပါ။ မနေ့က ကုန်ကျငွေ စုစုပေါင်းမှာ၊ ဖိနပ်၂ရံ ၃၇ကျပ်၊ ချဉ်ပေါင်ရွက်၂ကျပ်၊ မဒမ် ရိုတီစား ၄ကျပ်၊ ကိုကိုငွေ ပလာတာစား၎ကျပ်၊ ကုတ်တဗူး၁ကျပ်၊ MRT ကဒ်ဖြည့် ၁၀ကျပ်၊ စုစုပေါင်း ၅၈ ကျပ်။
Posted by ငွေလမင်း at 1:42 PM 14 comments
Posted by ငွေလမင်း at 5:38 PM 10 comments
ချစ်သူနဲ့ ထိုင်းမှာနေထိုင်တော့မယ့် Justin Bieber
အဲဒီ ပေါ့ပ်အဆိုတော်လေး ဘန်ကောက်ကိုပြောင်းဖို့ စီစဉ်နေတာကို Bangkok Post သတင်းစာရဲ့ The Buzz ကဏ္ဍကနေ အဲဒါကို ဖွင့်ချလိုက်တာပါ။အဆိုကျော်လေးက သူ့ရဲ့ လျို့ဝှက် ရည်းစားကို လွန်ခဲ့တဲ့ လ အနည်းက ထိုင်းနိုင်ငံကို အလည်အပတ်ခရီး ထွက်သွားခဲ့တုန်းက တွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီကောင် မလေး နဲ့ တွေ့ဆုံဖြစ်ဖို့ သူ့ သူငယ်ချင်းက အကြံပေးခဲ့တာ လို့လည်း သိရပါတယ်။ သူကတော့ ဖေ့စ်ဘုတ် ဘီလီယံနာ Mark Zuckerberg ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Zuckerberg က လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် အနည်းငယ်က ထိုင်းနိုင်ငံမှာ မင်္ဂလာဆောင်တခု လာတက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
Beber ကို စွဲလမ်းတဲ့ရောဂါရနေကြတဲ့ သန်းနဲ့ချီသော မိန်းကလေးတွေကို သေချာပေါက် အံ့သြတုန်လှုပ် သွား စေမယ့် ဒီသ တင်းကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်က အလစ်လပ်ဆုံး လူပျိုလေးတ ယောက်ဖြစ်တဲ့ Beberကို သူ့ရဲ့ ၁၇ နှစ် ပြည့် မွေးနေ့ပြီးတဲ့ ၁ လ အကြာ မှာပဲ ဒီစာရင်းကနေ ပယ်ဖျက် ပစ်လိုက်မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။ဂီတအသိုင်းအ၀န်းနဲ့ နီးစပ်သူတွေ အဆိုအရBieber ဟာ ဘန်ကောက် တက္ကသိုလ် က ဂီတ ကျောင်းသူတဦး လို့ ထင်ရတဲ့ သူ့ချစ်သူ ကောင်မလေးကို စတွေ့တဲ့အချိန်မှာပဲ မြင်မြင်ချင်း ချစ်မိသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
“သူ့ နာမည်ကို ဖော်ပြလို့ မရပေမယ့် သေချာပြောနိုင်တာတခုကတော့ သူမက အရမ်းလှပြီး ၊ အရမ်းကို ကြည့်ကောင်းတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ကောင်မလေးတယောက်ဆိုတာပါပဲ” လို့ ပြောထား ပါတယ်။သူမဟာ အရမ်းကို ရိုသေကိုင်းရှိုင်းတတ်ပြီး ၊ အေးချမ်းတည်ငြိမ်တဲ့ မိသားစုက လာ တာဖြစ်တယ် ဆို တာ ကောင်းကောင်း သိရသလို၊ သူတို့ ချစ်သူ နှစ်ဦးကို ကြည့်ရတာ တယောက်ကို တယောက်တကယ် ချစ်ကြ တယ်ဆိုတာ မြင်ရတယ်။အခုအထိတော့ သူတို့ဟာ သူငယ်ချင်းပုံစံ တွဲသွား ချိန်းတွေ့တာ မျိုးလောက်ပါပဲ။ နာမည်ကြီးတဲ့ ဆယ်ကျော် သက် တွေအ ကြိုက် ... ရုပ်ရှင်ကို အတူတူ သွားကြည့်ခဲ့မယ်လို့ ကျနော် ယုံတယ်။ ပြီးတော့ ကောင်မလေး အမေက သူတို့ ကြားမှာ ထိုင် တာဗျ ...။
ဂီတလောကထဲက အတွင်းသိ တယောက်က “Bieber ကတော်တော် ခိုက်သွားတယ်....သူ မစောင့်နိုင်လို့ ဘန်ကောက် ကို ပြောင်းနေတော့မယ်တဲ့ ။ သူ့ရဲ့ကမ္ဘာ့အနှံ့ ဖျော်ဖြေရေး အ သက်မွေး ၀မ်းကျောင်းနေ တာ တွေကိုတောင်စွန့်ပြီး သူ့ရဲ့ အထူး ကောင်မလေး ရှိတဲ့ ဘန် ကောက်မှာ လာနေတော့မယ်” လို့ ပြောပါတယ်။ Biber က သူ့ကောင်မလေးအတွက် ရည်စူးပြီး အယ်လ်ဘမ် တခုသွင်း မယ်လို့ သိရပါတယ်။ software ရှာတွေ့ တာနဲ့ တပြိုင်တည်း ကောင်မလေးအတွက် ထိုင်းအချစ်သီချင်းတွေ သွင်းတော့ပါမယ်။
Bieber ဟာ ဘန်ကောက်မြို့က ဂီတ စင်မြင့် တွေအပေါ်တတ်လာချိန်မှာ နာမည်ကြီးဂီတနေရာ အတော်များများ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့က ပျော်ရွှင်သွားကြတယ်။skytrain’s Sukhunvite Line မှာရှိတဲ့ Phrom phong station အနီးက နာမည်ကြီး expat’ pub နဲ အောင် နိုင်ခြင်း ကျောက်တိုင် (victory Monument) နားက Trendy Club တခုမှာ Bieber ဖျော်ဖြေမယ်ဆိုတာ အစ ကတည်းက အစီစဉ် ရှိခဲ့တယ်လို့ယုံ ကြည်ရပါတယ်။ဂီတအသိုင်း အ၀န်းထဲက လူတွေကတော့အဲဒါကမ ယုံနိုင်လောက်အောင် အံ့သြစရာကောင်းတယ်။ တ ကယ်တော့ ဒီလို မျိုး အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ story မျိုးတနှစ်မှတခါလောက်ပဲ ရတတ်တယ်လို့ ပြောဆို နေကြ ပါတယ်။
၁.၄.၂၀၁၁နေ့ထုတ် BANGKOK POST သတင်းစာမှာတော့ ဒီလိုရေးသားထားပါတယ်
Justin bieber ready to move to bangkok to be with thai girlfriend.
The news _ which is sure to shock millions of teenage girls with "Bieber fever" _ takes one of the world's most eligible bachelors off the market justamonth after his 17th birthday.
A record industry source told The Buzz that it was "love at first sight" when Bieber met the girl, believed to beamusic student ataBangkok university.
"I can't reveal her name, but I can say that she isabeautiful and very smart young woman," the source.
"She comes fromavery respectable and quite well known Thai family, and it seems like this is true love.
"So far they have only been on chaperoned dates. I believe they went to see the popular teen movie Suck Seed Huay Khan Thep together, and her mother sat between them.
"But Justin is so smitten he has told friends he can't wait to relocate to Bangkok. In fact he has said that he would happily give up his global career for this very special girl."
It is understood that Bieber will also record an album of Thai-language love songs dedicated to his girlfriend as soon as he can findaThai version of the popular Auto-Tune software.
A number of well-known music venues yesterday confirmed they would be happy to have Bieber appear on stage in Bangkok. It is believed he has already been pencilled in for intimate performances atatrendy club near Victory Monument andapopular expats' pub near Phrom Phong station on the Skytrain's Sukhumvit line.
One music industry insider added: "This is so incredible it's almost impossible to believe. In fact, I'd go so far as to say that you'd getastory as amazing as this just onceayear, probably on this date."
Posted by ငွေလမင်း at 12:13 PM 11 comments